जलविद्युतको शेयरको बिचल्ली - UrjaKhabar
जलविद्युतको शेयरको बिचल्ली
असोज ३०, २०७६ 741 लेख
दोस्रो बजार बियरिस ट्रेन्डमा गइरहेको अवस्थामा नेपालीहरूको महान् चाड दशैंतिहार आएकै कारण झन् घटेकै अवस्थामा देखापर्‍यो । त्यसो त हरेक वर्षको दशैंतिहारको बेला बजार घट्ने गरेको अनुभव छ । दशैंतिहारमा पारिवारिक खर्च आवश्यक भएकै कारण बजारमा आफ्नो लगानीको शेयर बेचेर खर्चको बन्दोबस्त गर्ने चलन छ । सरकारी जागीरेको अलग्गै कुरा भयो । उनीहरूको दशैंमा २ महीनाको तलब थाप्न पाउँछन् । बाँकी लगानीकर्ताको चलन त दोस्रो बजारबाटै काम चलाउने गर्छन् । चाडवाडको बेला नकिन्ने विक्रीको मात्र चाप हुने हुँदा माग र आपूर्तिको सिद्धान्त अनुसार माग नहुनाले मूल्यमा नकारात्मक असर पर्ने हुँदा मूल्य घट्न जान्छ ।
बजारमा एउटा आरोप छ, नयाँ लगानीकर्तालाई बजार बढ्छ भन्दै फसाउने अनि बजार तल झरेमा पाँच सातजना लगानीकर्ताले मिलेर केही दिन नेप्से बढाएर फाइदा लिने गर्दा सोझा लगानीकर्ताले पनि बढेको नेप्सेलाई पत्याउन छोड्दा बजारको यो हालत भएको हो । गाउँमा एउटा उटपट्याङ केटोले सधैं बाघ आयो, बाघ आयो भनेर चिच्याउँथ्यो तर साँच्चै बाघ आउँदा पनि गाउँलेले पत्याएनन् भन्ने उखान चरितार्थ पो भएको हो कि ? अहिलेसम्म बजार नेतृत्व बैंक समूहले नै गरिरहेको र सबै बैंक नाफामा गइरहेको अवस्थामा नेप्से किन घट्दै गएको हो, अध्ययनकै विषय छ । हो, बरु भविष्यमा बजारमा बैंकको नेतृत्व भइरहेको स्थानमा अब नेतृत्व चाँडै नै जलविद्युत् कम्पनीहरूले लिने छन् ।
जलविद्युत् कम्पनीले बजारको नेतृत्व गर्ने सिलसिलामा प्रकाशित भएका खबरहरूलाई पनि महत्त्व नदिई रहन सकिँदैन । हालै निजीक्षेत्रका २० जलविद्युत् प्रवर्द्धकले आफ्ना जलविद्युत् आयोजना लीलाम गरिदिन भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाए । जसमा सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्कासन गरेको ५ कम्पनी पनि छन् । हजारौं सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई वार्षिक लाभांशको प्रलोभन देखाएर शेयर विक्री गर्ने निजी लगानीका जलविद्युत् आयोजनाहरू खर्चसमेत धान्न नसकेर बैंक ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । बैंकको किस्ता त परै जाओस् उनीहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लगाउने पेनाल्टी समेत तिर्न नसकेर आयोजना नै सरकारलाई बुझाउन तयार भएका हुन् ।
जलविद्युत् व्यवसायीहरूले औपचारिक रूपमा विभागमा लीलामको आग्रह गर्दै बुझाएको आयोजनाको सूचीमा एक मेगावाट भन्दा साना आयोजनादेखि १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् । नेपालमा निजीक्षेत्रबाट अहिलेसम्म ८१ ओटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भई ५६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । तर, अति समस्याग्रस्त आयोजनाको सूचीमा भने २० ओटा आयोजना देखिएका छन् । तर, यी बाहेक अन्य आयोजना पनि समस्याग्रस्त सूचीमा पर्ने क्रममा रहेका छन् । निजीक्षेत्रका कुल ८१ जलविद्युत् आयोजनामध्ये ११ ओटा जलविद्युत् आयोजना भने १० मेगावाट भन्दा ठूला रहेका छन् र उनीहरूको कुल क्षमता ३०० मेगावाट हुन्छ ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माताहरूले समस्याग्रस्त आयोजनामा सरकारी सहयोग र समर्थन माग्नका लागि ‘रुग्ण आयोजना संघर्ष समिति’ गठन गरेका छन् । ९० प्रतिशत आयोजना समस्यामा परेका छन् । अहिले थप पाँचओटा आयोजना पनि समस्यामा परेका छन् । ७० मध्ये ६६ ओटा आयोजनामा नै हाइड्रोलोजी समस्या देखिएको अर्थात् पानीको सतह नै घटबढ भएको भनिएको अर्थ खोला खुक्दै गएको कारण नै बैंक ऋण तिर्न र प्राधिकरणको सम्झौता अनुसार चल्न नसक्ने भएका हुन् ।
२५ देखि ३० वर्षसम्म न्यूनतम उत्पादन हुने गरी बनाइएको आयोजना शुरूका वर्ष प्रक्षेपण गरे अनुसारकै विद्युत् उत्पादन भए तापनि अहिले भने खोला सुक्न थालेको कारण समस्यामा परेको देखिन्छ । प्रक्षेपण गरिएको विद्युत् उत्पादन गर्न नसकिएको कारण अहिले २० ओटा आयोजनालाई जरीवाना लगाइरहेको छ । थोरै विद्युत् बेचेर आउने पैसा पनि प्राधिकरणलाई जरीवाना तिर्दैमा ठिक्क हुने गरेको छ । तर, बैंक ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले सताइएको छ । त्यस्तै गरेर आयोजनाको मर्मतसम्भार, कर्मचारी व्यवस्थापन खर्च गर्न नसकिने अवस्था आइपरेको छ । उदाहरणका केही जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ललितपुरको भट्टे डाँडामा रहेको खानीखोला जलविद्युत् कम्पनी लगायत वरुण हाइड्रो पावर, सिनर्जी पावर, नेपाल हाइड्रो र आँखु खोलाको अवस्था दयनीय रहेकाले पाइपलाइनमा रहेको हाइड्रोपावरको आईपीओको बजार दयनीय अवस्थामा पुग्ने हो कि, विचारणीय छ ।
झन्डै २ वर्षअगाडि जलविद्युत् मन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नो भाषणमा जलविद्युत्को शेयर किनेपछि ज्वाइँ खोज्न धाउनु नपर्ने, उल्टो हुनेवाला ज्वाइँ आफ्नो घरैसम्म आइपुग्छ भनेका थिए । त्यसको अर्थ नै जलविद्युत्को शेयर किनेपछि मालामाल भइन्छ भन्ने हो । तर, मन्त्रीको भाषण अनुसार हुन भने सकेन ।
पछिल्लो समय रुग्ण जलविद्युत् आयोजना संघर्ष समितिको सुनुवाइ भएको छ । बैंकको ब्याजमा राम्रो सहुलियत दिन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर सकारात्मक देखिनुभएको छ । यसअनुसार ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जामार्पmत सहुलियत कर्जा प्रदान गरिने र शून्य दशमलव २५ प्रतिशत सेवा शुल्कमा पुनर्कर्जा प्रदान गरिने भएको छ । यसबाट रुग्ण आयोजनाहरूलाई केही राहत महसूस हुन्छ कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । उक्त सुविधा ऋण विद्युत् नियमन आयोगको सिफारिशमा हुन लागेको हो ।
हालै मात्र १२ कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएकामध्ये ८ कम्पनी त जलविद्युत् कम्पनी मात्र छन् । तिनमा ग्रीनलाइफ हाइड्रोपावर, माउन्टेन इनर्जी, युनाइटेड आईडीआई हाइड्रोपावर, शिवश्री हाइड्रोपावर, मैलुङ खोला डेभलपमेन्ट, सिंगटी हाइड्रोपावर, शुभम् पावर लिमिटेड र लिबर्टी इनर्जी कम्पनी रहेका छन् ।
दोस्रो बजारमा हाल दुईथरीका जलविद्युत् कम्पनीको शेयर कारोबार भइरहेको देखिन्छ । एउटा आईपीओको मूल्यभन्दा माथि, अर्को नाफा बाँड्न नसकेका कम्पनीहरूको मूल्य आईपीओभन्दा तलको मूल्यमा कारोबार भइरहेको देखिन्छ । २०७६ असोज तेस्रो हप्तासम्मको कारोबार मूल्यको आधारमा सस्तोमा ५० रुपैयाँसम्मको र बढी मूल्यमा ९७ रुपैयाँसम्मको मूल्यमा किनबेच भएको देखिन्छ । कम मूल्यका जलविद्युत् कम्पनीहरू नेशनल हाइड्रोपावर, आँखुखोला, दिव्यश्वरी, अरुण भ्याली, घलेम्दी, जोशी, कालिका, खानीखोला, माउन्टेन हाइड्रो, नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स, ङादी ग्रूप, पाँचथर, पञ्चकन्या माई, रिडी हाइड्रोपावर, सिनर्जी पावर, युनियन हाइड्रोपावर, युनिभर्सल पावर, छ्याङदी हाइड्रोपावर आदि रहेका छन् ।
कारोबार भएकै आधारमा असोजको तेस्रो हप्तासम्म उच्च मूल्य भएका पाँच जलविद्युत् कम्पनीमा चिलिमे ४२७ रुपैयाँ प्रतिशेयर, बुटवल पावर ३९८ रुपैयाँ, अपर तामाकोशी २४० रुपैयाँ, सानिमा माई २०६ रुपैयाँ रहेका छन् । यसै सिलसिलामा समस्याग्रस्त जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई हाम्रा जलविद्युत्विज्ञ सफल व्यक्तित्व कुलमान घिसिङबाट एकमुष्ट सञ्जीवनीबुटी प्रदान हुने पो हो कि ? आशा गरौं । यो पनि उहाँको सरोकारको विषय हो ।